Iibso 100 Seeds Rare Holland Rainbow Rose Ubaxa Guriga Beerta - Rar bilaash ah & Cashuur la'aan | WoopShop®
100 Seeds Rare Holland Goobta Daaqa Rose Garden Goobta beerta
$ 3.16 qiimaha joogtada ah $ 3.96
Nooca Product: Bonsai
Isticmaal: Goobaha Dibadda
Kobcin Dhibaato adag: joogtada ah
Qoondaynta: Beer farxadeed
Wakhtiga buuxa ee Bloom: Summer
Nooca: Dhirta Blooming
Dheriga ubaxa: Ka reeban
Qalabaynta la adeegsan karo: Aries
kala duwan: Rose
Number Model: Abuurka Rose
Talooyin: Abuur ku shub biyo 40 ° C ah 24 saacadood. Ku rid abuurka ciid aad u qoyan si aad uga soo baxdaan. (Guud ahaan waxay qaadataa in ka badan 40 maalmood.) U guur carrada markay soo baxdo. Heerkulka biqilka: 20-25 Waqtiga biqilka: 40 maalmood Kobaca heer kulka ugu wanaagsan: 10-25 Kala dheereynta: 20 * 20cm Kordhinta carrada ha weydiisan wax badan, kaliya qaab dhismeedka wadarta carrada humus waa tababar fiican ilaa iyo inta saddexda xiriiriye ee soo socda ay sameyn doonaan koritaanka wanaagsan: Rose wuxuu ka baqayaa: Rose waa dhirta abaarta u adkeysata, laakiin waxay ka baqeysaa daadadka. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo dheriyo aan-glazed ahayn oo dheriga lagu beero. Mabda'a ayaa ah "ha ku shubin biyo marka carradu aysan qalalin. Si buuxda u qoy marka aad biyo ku daadiso dhulka." Deyn uruurinta sare ee bacriminta (gaar ahaan bacriminta) waxay sababi doontaa dhimashada qudhunka deegaanka. Dhammaan dhirta waxay u baahan yihiin iftiinka qoraxda Ubax sida qorraxda oo kale. Fiiro gaar ah: 1. Fadlan abuurka ku keydi meel qabow oo qalalan. 2. Dusha sare ee abuurku waa 1-2 jeer dhexroorka abuurka. 3. Ku dabool abuurka filimada ilaaliya, ka dibna dalool filimada si aad u sameyso godad dhowr ah. Abuur miraha daboolan maalintii oo daaha ka qaad habeenka. Ka qaad filimada ka hortagga uurka markii iniinyaha badhkood biqlaynayaan. Warshaddu waxay ahaan doontaa xaalad nasasho xagaaga caleemihiisuna huruud bay isu noqonayaan. Dadka wax cunaya waa inay si fiican u isticmaalaan ciid si ay u beero abuurka.Inkastoo abuurku si gaabis ah ugu dhex bixi doono ciidda, dhirtu waxay noqon doontaa tan ugu xoogga badan mustaqbalka. Haddii aad u baahan tahay inaad isticmaasho nooc kale oo carro ah, isku day inaad u isticmaasho nooca leh biyo-soo-bixid wanaagsan, tusaale ahaan, dhoobadu ma noqon doonto xulasho wanaagsan. Ciida waa in lagu sumeeyaa foornada microwave kahor intaan la isticmaalin. Fiiro gaar ah: dusha sare ee carrada ma aha mid aad u qalalan, taas oo aad muhiim u ah. Marka waraabinta, ciidda oo dhan waa in la qoyaa oo looma baahna in la waraabiyo maalin daruur leh. 4. Dherigu wuxuu noqon karaa 6-8cm qoto dheer, wuxuu noqon karaa weel dhoobo ah ama mid caag ah.
5. Miisaanka carrada waa inuu ka fogaadaa fogaanta 1-2cm laga soo qaaday dheriga dheriga.
Seminarada Seminar Upakovany pikolno в конвертик. Wixii aad aragtid cagihiisa kagama uu shubin, Xerooyinkaagana waa laga gooyn doonaa.
Abuurka ayaa yimid OK